::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather निर्वाचनको मौन अवधि सुरु, उल्लङ्घन गरे एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द:: Rojgar Manch ::
शुक्रवार, चैत्र ०९ गते, २०७४
निर्वाचनको मौन अवधि सुरु, उल्लङ्घन गरे एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द
बुधवार, २०७४ मंसिर १९ गते ००:१०
अन्तिम चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मौन अवधि सोमबार मध्यरातदेखि सुरु भएको छ । सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु समेत सम्मिलित अन्तिम चुनावी सभा भएका छन् । सबै उम्मेदवारले अन्तिम पटक मतदातामाझ सार्वजनिक कार्यक्रम गरे ।
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रचारका कार्यक्रम रोकिएका छन् । मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले मतदाताबीच सार्वजनिक कार्यक्रममात्र हैन सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गर्न पाउने छैनन् ।
मौन अवधिको आचारसंहिता सञ्चारमाध्यमलाई समेत लागू हुनेछ। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा समेत मौन अवधिमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतमा समेत मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा ’एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने’, उल्लेख छ ।
त्यस्तै दलका उम्मेद्वारहरुले राजनीति दलको चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी र स्टीकर प्रयोग गर्न समेत पाउने छैनन् ।
के के गर्न पाइँदैन
निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा उम्मेदवारले भोट माग्न तथा अन्य प्रचारात्मक काम गर्न पाइने छैन्। मौन अवधिको उल्लङ्घन भएको ठहर भएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ ।
उम्मेदवार तथा दलहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाउँदैनन् । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनु पर्नेछ । एसएमएस, फेसबुक, भाइवरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन । मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन ।
के हुन्छ कारबाही ?
मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लङघन गरेमा निर्वाचन आयोगले सुरुमा सचेत गराउन सक्नेछ। आयोगको सचेत गराउदा पनि बेवास्ता गरेमा उम्मेदवार र दललाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको प्रावधानमा टेकेर मौन अवधि उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्द गर्न समेत सक्नेछ ।
आयोगको आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सबैले पालना गर्नु पर्नेछ ।
76. कतारको निम्तो छाडेर राष्ट्रपति भण्डारी युएई जाँदै
77. स्थलगत अध्ययनपछि चिनियाँ टोलीले भन्यो–केरूङ-काठमाडौं रेल संभव
78. विवेकशील साझा पार्टीको घोषणा पत्र
79. बाम गठबन्धनद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक
80. अमेरिकाका ३८ डाक्टरद्धारा निःशुल्क दन्त शिविर (फोटोफिचर)
81. बाम घोषणापत्र : ५ वर्षभित्र गरिविमुक्त, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउने
82. लायन राजेन थापाको भव्य स्वागत, शनिबार बन्दिपुरमा निशुल्क आँखा शिविर
83. काठमाडौंको कमलादीमा गोली चल्यो, तीन भारतीय पक्राउ
84. काठमाडौं उच्च जोखिममा
85. काँग्रेसको घोषणापत्र : ५ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र, तीन देखि पाँच लाख रोजगारी
86. नेपाल–अष्ट्रेलिया सिधा हवाई सेवाका लागि अध्ययन गरिने
87. उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ समापन
88. सूर्यको आराधना गरी आज छठ पर्व मनाइँदै
89. खोटो बेचेर करोडौं आम्दानी गर्छन् सामुदायिक वन
90. मुख्य सचिवमा लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त
91. कवाडी बटुल्ने विदेशीहरू करोडौँको नेपाली पूँजी लान्छन्
92. अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरी नै मानव तस्करमा संलग्‍न : सेटिङबाट युएई गएका १५ जनाको उद्धार
93. एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष महतोको मेडिसिटी अस्पताल संचालनमा
94. भूकम्प पीडितलाई सामुहिक जमानीमा ऋण दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
95. कोजाग्रत पूर्णिमा आज,दशै सकियो
96. अमेरिकाले खुलायो इडिभी चिट्ठा २०१९ को फर्म, कात्तिक २१ सम्म भर्न सकिने
97. अरुण तेस्रो शिलान्यास गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने
98. अमेरिकाले लगायो ८ मुलकमाथि अमेरिका घुम्न प्रतिबन्ध
99. कुलेश्वर पोलिक्लिनिक सहित ४ संस्थाको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम
100. सात लाख भूकम्पपीडितको दशैं टहरामै
Results 669: You are at page4of 27